IHuawei isungula uluhlu lwayo olutsha lwe-2018 Y: Iifowuni ezimbini eziphathwayo ezinentsebenzo elungileyo kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi iHuawei ayinakulunga okomzuzwana kwaye ibhengeze nje ukumiliselwa kweY yayo entsha yezixhobo eziphathwayo. Kule meko imalunga neHuawei Y7 entsha kunye neHuawei Y6 ezi zixhobo zenqanaba lokungena kwabo bangafuni kuchitha imali eninzi kwaye ngubani zikhutshwa nge-EMUI 8.0 esekwe kwi-Android 8.0.
Ezi zimbini iimodeli ezintsha zeHuawei Y7 kunye neHuawei Y6, banesiboniso seHuawei sikaVenkile, iimpawu zekhamera eziphambili, kunye nobomi bebhetri obude. Ngeli xesha sibona ukuba iHuawei idibanisa njani indawo yentengiso enomdla kwii-smartphones ezisemgangathweni ngexabiso elifikelelekayo.
1 IHuawei Y7 entsha
IHuawei Y7 entsha
Kule modeli sifumana isikrini I-Huawei FullView 5,99 intshi ngaphandle kwe-bevel eninzi kakhulu kunye nomyinge we-18: 9. Ngale modeli sidibana nepaneli yeglasi egobile engu-2.5D, ebonelela ngeenkcukacha ezithile ezinomdla ngokweekhamera, kule meko ine- cIkhamera engaphambili eyi-8 megapixel kunye Ikhamera engasemva eyi-13 megapixel. I-flash ye-selfie ehamba phambili yokukhanyisa ngokuzenzekelayo ibona ukukhanya ebusweni kwaye ngobuchule uhlengahlengisa amanqanaba okuqaqamba ukuze enze imizobo ekhangeleka indalo.
Ukongeza, le modeli yongeza iprosesa ye-Octa Core Snapdragon 430, i-Adreno 506 GPU, i-2GB ye-RAM kunye nokugcinwa okungaphakathi kwe-16GB yangaphakathi, ukuvula iminwe yeminwe kunye nokuvula ubuso ngokuchaneka okuthe ngqo. Inendawo yokubeka enomthamo wamakhadi amathathu, axhasa amakhadi amabini e-NANO SIM ngaxeshanye, kunye nekhadi le-Micro SD elinikezela nge-256 GB yokugcina eyongezelelweyo. Kule modeli Imibala efumanekayo zezi luhlaza okwesibhakabhaka nomnyama, amaxabiso alo aqala kwi-199 Euro.
Kule meko sine-5,7-intshi yeHuawei FullView kunye ne-HD screen, eneenkcukacha ezifanayo nezomntakwabo ngokweekhamera. Kule meko kananjalo yongeza itekhnoloji yeHuawei's Histen, ebonelela ngeendlela ezintathu zokuphulaphula umculo: vala (isithethi sefowuni), umphambili (ukusebenza kwethiyetha) kunye nobubanzi (ukusebenza kwekonsathi). Kwelinye icala izisa iprosesa ye-Snapdragon 425, kunye ne-2GB ye-RAM kunye ne-16GB yokugcina kwangaphakathi.
Zombini izixhobo zeHuawei zinobungakanani bebhetri ye-3000 mAh ethi ngokutsho komvelisi yongeze ubomi ngokufanayo ngeeyure. Kwi-Huawei Y7, abasebenzisi banokubukela iividiyo ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-13 ngokuthe ngqo okanye badlale umculo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-58. Kwi-Y6, abasebenzisi banokubukela ividiyo ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-14 okanye badlale umculo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-57. Iimodeli ezimbini ezintsha ezongeza kuluhlu olude lwezixhobo zongeniso ezinomdla ngokukodwa xa kuthathelwa ingqalelo ixabiso lazo nganye. Kule meko IHuawei Y6 ifumaneka ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide ukusuka kwi- € 149.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IHuawei isungula uluhlu lwayo olutsha lwe-2018 Y: iifowuni ezimbini ezineselfowuni ngokusebenza kakuhle kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo
IXiaomi ilungiselela ukufika: e-United Kingdom, e-Ireland, e-Austria, e-Denmark, e-Itali nase-Sweden